अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मा रचनात्मक रोजगार क्रिएटिव अनलाइन
जोस एन्जेल | | ग्राफिक डिजाइन, सामान्य
आज मे १ मा मनाइन्छ Casi सबै अन्तर्राष्ट्रिय कामदार को दिन मा। एक विश्राम को दिन तिनीहरू सबैको लागि विश्रामको बखत तिनीहरूको व्यवस्थापनको सम्मानमा। लाखौं कामदारहरू छन् जुन आज एक दिनको अन्तमा उनीहरूको फोटोहरू प्रकाशित गर्दछन् र खाली समयको मजा लिइरहेका छन्। सबै भन्दा पहिले, बधाई! आज हामी यस शताब्दी र भविष्यका सृजनात्मक कार्यहरूको समीक्षा गर्न जाँदैछौं।
यी रोजगारहरू निकट भविष्यको सम्बन्धमा सबै भन्दा साधारण हो। हामी आज ह्यान्डल गर्ने टेक्नोलोजीहरूको कारणले गर्दा, यी प्रकारका कार्यहरू अनुसार हाम्रो दिनहरूमा अधिक भनिन्छ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस.
1 YouTuber हुनु
3 भिडियो खेल को संसार याद गर्न सकेन
4 फेसन डिजाइनर
जे होस् क्षमता को लागी केहि व्यक्तिको augury YouTubers मध्यम र लामो अवधिमा यो विनाशकारी छ, अरूलाई वास्तव मा यो भविष्यको कामहरू मध्ये एक हुनेछ भन्ने सोच्दछन्। यूट्यूब प्लेटफर्म परिवर्तन हुँदैछ। तर तपाईंले हेर्नु पर्दछ कि यूट्यूबमा कसरी अधिक र अधिक कामदारहरू छन्। पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्ने र अधिक सामान्य सामग्री (यी श्रमिकहरूको बर्षमा हासिल गरिएको) द्वारा निर्देशित नभएको अवस्थामा। यो सबै दर्शकहरूको लागि कम्पनी हुन सक्दछ। अवश्य पनि, विज्ञापन र मिडिया क्षेत्र मा विकसित हुन पर्छ।
दुबै स्पेन र अन्तर्राष्ट्रिय मा केहि व्यक्तित्वहरु यसबाट बाँचिरहेका छन्। र यसमा सर्नु सजिलो छैन भन्नेमा कुनै अचम्म छैन 26 मिलियन मानिस जस्तै तपाईले गर्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, रुबियस। यी सबै, थप रूपमा, 'घर नछोडीकन'।
नयाँ अन्त्यको साथ जारी राख्दै «-ईआर अ from्ग्रेजीबाट अपनाइएको, यो अर्को पेशा हो जुन प्रवृत्ति समातिन्छ। Creativos अनलाइन यसको एक उदाहरण हुन सक्छ, एक ब्लग जुन धेरै व्यक्तिमा पुग्न प्रबन्ध गर्दछ र त्यो विज्ञापन द्वारा टिकाव हो। यो इक्कीसौं शताब्दीको काम बढ्दो मागमा छ। र यदि हामी केवल पारम्परिक ब्लगमा मात्र हेर्दैनौं, हामी छवि ब्लगहरू कसरी अवस्थित छौं भनेर हेर्न सक्दछौं (Instagramers).
यद्यपि लगभग कुनै पनि ब्लग आज चासो जगाउन सक्छ, त्यहाँ धेरै छन् कि तातो छन्। Actualidad ब्लगमा त्यहाँ धेरै खाली स्थानहरू छन् जुन धेरै चासोको विषय हो जस्तै Recetín, Actualidad Motor, Actualidad Iphone र अवश्य पनि, क्रिएटिव अनलाइन.
भिडियो खेल को संसार याद गर्न सकेन
यदि तपाईंले अहिलेसम्म कुनै भिडियो गेमहरू खेल्नुभएको छैन भने यसको मतलब यो हो कि कमसेकम तपाईं जंगलमा हराउनुहुनेछ। हरेक दिन, कुनै पनि मञ्चबाट, हामी कुनै पनि खेलमा खेलाडीहरू देख्छौं। अधिक अब, जब एकल खेलहरूले मल्टिप्लेयर खेलहरूलाई मार्ग दिइरहेका छन्। लेखन देखि ठूलो आवाज संग कुरा गर्न दुश्मन.
यो सोच्न तार्किक छ कि भविष्यमा यो पेशा वा तिनीहरू मध्ये एक हुनेछ, ठूलो र नयाँ पुस्ता द्वारा अनुरोध। र ती मध्ये एक हुनेछ भिडियोगेम परीक्षक। केहि धेरैका लागि सपना हुन्छ, भिडियो खेलहरूको परीक्षण गर्नु भनेको भिडियो गेमले आवाश्यकताहरू पूरा गर्दछ भनेर प्रमाणित गर्नु बाहेक अरू केहि छैन। ग्राफिक स्तरमा, ईतिहास, मल्टिप्लेयर, आदि। परीक्षक आकलन गर्न को लागी जिम्मेवार व्यक्ति हुनेछ कि यो उत्पादन इष्टतम अवस्थामा बजारमा जान्छ।
यदि तपाईं यो काममा इच्छुक हुनुहुन्छ, र तपाईं भिडियो गेमहरूको रचनात्मक प्रक्रियाको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, यस क्षेत्रका पेशेवरहरूलाई प्रशिक्षण दिनको लागि त्यहाँ क्यारियरहरू छन्। तिनीहरू मध्ये केही विश्वविद्यालयबाट एनिमेसनको डिग्री र प्लेस्टेशन प्रथमबाट डिजाईन र विकासमा स्नातकोत्तर डिग्री हुन्।
यद्यपि यो कामको पहिले नै समय छ, तस्विर आज कस्तो छ भनेर हेरेर, यो पहिले भन्दा अझ बढी राम्रो देखिन्छ।। यो आर्थिक कुलीनको पेशा हुनु अघि। तर अब, सामाजिक मिडिया को प्रयोगको साथ र भाइरलाइजेशन सामग्री डेमोक्रेट गरिएको छ। यहाँ तपाईले धेरै रचनात्मकता विकास गर्नुपर्नेछ, किनकि वास्तवमा यो खास स्वादमा आधारित छैन। बरु यो प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा गाह्रो पोइन्ट हो। यहाँ यदि तपाईले आफैलाई बाहिर निकाल्न एकदम हडताल गर्नु पर्छ भने।
कम से कम त्यो कसरी यो ज्ञात छ संसार। उनीहरूलाई प्रवृत्ति शिकारीको रूपमा पनि चिन्न सकिन्छ र तिनीहरूको लक्ष्य उपभोक्तावाद र फेसनको संस्कृतिको बारेमा परिवर्तन वा उद्भवको बारेमा भविष्यवाणी गर्ने हो। कूलहन्टर सबै भन्दा माथि छ, एक सामाजिक अनुसन्धानकर्ता, जसले विश्लेषण र यसको वरिपरिको प्रश्नहरू छिटो भविष्यमा चीजहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन् भनेर भविष्यवाणी गर्न कोशिस गर्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » अन्तर्राष्ट्रिय कामदारको दिनमा रचनात्मक रोजगारहरू
रातो र नीलो, दुई रंग जुन तपाइँ अधिक रचनात्मक र बुद्धिमान बनाउँदछ